Wonke umuntu uyazi futhi uyaqonda ukuthi izinguquko zefashini nesikhathi. Izembatho, izesekeli kanye nokucwebezela akuzona njengemfashini njengoba zivele zibonakala. Izitayela ezintsha zivela, izinto zakuqala ziyadalwa, kodwa abaningi bakhetha iqiniso lokuthi linomlando omude.
Umhlobiso - ubuthakathaka besifazane. Ayikho indlu ehloniphayo ngeke idlule ngezingubo zokugqoka ezihle kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi kuyinto engabizi noma into enhle kunazo zonke. Kodwa indawo ekhethekile phakathi kwazo zonke izinhlobo zezindwangu zithathwe yi-bijouterie ngesitayela sokuvuna.
Kusho ukuthini "ukuvuna"?
Leligama lesiFulentshi, emhlabeni wezemfashini lisho isiqondiso esibhekiswe ekuvuseleleni ukuthambekela kwangaphambili.
Unyaka nonyaka, ukuthandwa kwezitayela zesitayela sokuvuna kukhula futhi kuqala ukuba nesimo esiphambili phakathi kwazo zonke izinhlobo zokuphanga. Ngesikhathi esifanayo izihlobiso ezinjalo zibukeka kahle futhi zibukeka ngendlela efana nabesifazane abasha, nakwabesifazane besizukulwane esidala.
Isitayela sokuvuna - kuhle, ukuhlobisa okukhulu nokukhazimulayo, okuhlanganisa imininingwane emincane eminingi. Izinto zokwakha ezenziwe ekwenzeni izivuno zevintage zihlanganisa igolide, isiliva, amaparele, ubuhlalu, izinkuni, indwangu kanye nephepha.
Ukuhlobisa kwangempela kulesi sitayela kunzima ukuthola, futhi bayakwazisa kakhulu. Abaningi bane-bijouterie, badluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane, izesekeli ezigcizelela ukunambitheka okucashile, ukulungiswa nokuhlonipha. Kodwa-ke, akuwona wonke umuntu ongathola amabhlokwe angempela, okuyinto emakhulwini amaningi eminyaka. Kulesi simo, ukusiza abesifazane ukuba bafike ezitolo ezinikeza ukuhlanganiswa okukhulu kwezinto kule ndlela. Lokhu, okwenziwe kahle, wenza izinto ezinhle, kodwa hhayi isivuno sangempela. Noma kunjalo, ukuhlobisa okunjalo kubheka okumnandi, okuyingqayizivele futhi okukhunjulwayo. Indodakazi ngayinye izothatha kalula umhlobiso othize oyogcizelela ubuntu bakhe.
Ngingayenza yini umhlobiso ngokwami?
Uma uthola futhi uthenge ukuvunwa komvuno kunzima, ungenza umhlobiso we-vintage ngokwakho, futhi uzokujabulela kabili umnikazi. Eqinisweni, kungenzeka.
Kulula ukuthola izincwadi zendlela yokudala imihlobiso yangempela kule style, kanye nezinto ezidingekayo, izingxenye zezingxenye.
Ukudala ubucwebe bakho be-vintage kuyinto ibhizinisi elijabulisa kakhulu, njengomphumela ongathola umhlobiso wokuqala, okungukuthi, ngeke uthole noma kuphi. Okusho ukuthi, ungakha into nge-design engavamile ekufezeni kwayo.
Ukusesha ifenisha yevintage ngeke kubambezeleka, njengoba manje sekuthengiswa ezindaweni eziningi. Lokhu kusho ukuthini? Izixhumanisi zensimbi, izixhumanisi, amabheyili, izikhonkwane, швензы, пуссеты. Ekudalweni kwezindwangu zokuvuna, ama-cameos, ama-cabochons, ama-rhinestones, izitembu.
Lezi sitembu zivame ukubonisa izimbali, izimvemvane, amaqhawe amnandi, zingabanjwa ngilazi, i-filigree nelitshe.
A cameo isithombe convex yomuntu noma isilwane. Esikhathini sethu, ama-cameos anqunywe ngesandla ngezixhobo zemvelo, futhi ayenziwe nge-plastic. Indlela yesibili ifinyeleleka futhi ijwayelekile, futhi ngesikhathi esifanayo inhle kakhulu. Kukhona ama-cameos enziwe nge-porcelain ne-glass.
I-Cameo iyi-classic, ethandwa nganoma yisiphi isikhathi. Kwavela ngenkathi yoVukani, ngalezo zinsuku kwakubhekwa njengesikhumbuzo. Akukhona abesifazane kuphela, kodwa amadoda athatha i-cameo, eyadluliselwa kusukela esizukulwaneni kuya esizukulwaneni.
Zifana ne-cameo, izinhlangothi zihlukile: eyodwa-flat, kanye nezinye - izici. Benza ama-cabochons amatshe, okungajwayelekile ngeglasi. Ziyizinyosi, futhi empeleni kuyinto enzima kakhulu. Akuwona wonke umuntu ongadala ukuvuna ama-cabochons, udinga ulwazi kanye namakhono athile. Kodwa umsebenzi oqaphile uzoholela emiphumeleni engenakulinganiswa.
Lona luhlaka lapho ama-cameo namacabochons abanjwe khona.
Uma kungekho isikhathi sokudala umhlobiso womlobi, khona-ke ukuthenga kwesivuno sangempela kufanele kuqondiswe isikhumbuzo:
Lokhu kuvuna kuyinto endala ngomlando wayo, omunye umuntu owawuvame ukugqoka ngaphambili. Kodwa-ke, ngisho nomdayisi angase angazi indaba yeqiniso. Ungazama ukuzichaza ngesikhathi sakho sokuzilibazisa.
Ngisho noma umhlobiso awunayo imvelaphi, intengo yawo akufanele ifakwe ngaphansi.
Uma umthengi ethemba ukuthola umhlobiso omuhle wamanani aphansi aphansi, kungcono ukuthi angaboni ukuvuna.
Ngoba konke okuhle kakhulu, ungathenga kuphela ngentengo enengqondo.
Kodwa-ke, kungenzeka ukuba unikeze ukuxoxisana, kungenzeka ukuthi imizamo ingahle ibekwe yimpumelelo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukubuya kwezingubo zokuvuna ngeke kube ngu-niggard futhi ngeke. Ngakho ngaphambi kokuthenga kungcono ukutadisha ngokucophelela umhlobiso.
Okokugcina, emva kokuthenga, thanda futhi ujonge ukuhlobisa kwakho.
Akuyona yonke imihlobiso emidala ye-quintuple, ngayinye ithatha ngaphakathi kwayo inzuzo yayo. Umhlobiso omuhle kakhulu, owodwa, oyingqayizivele we-vintage ngempela. Futhi okubaluleke kakhulu, izesekeli ezinjalo zizofika ezintweni zonke kusukela endodeni yokugqoka nsuku zonke kuya kwengubo enhle kakhulu. Owesifazane uzobheka njengenkosikazi yangempela kunanini ngaphambili, okwazi ukunqoba izinhliziyo zamadoda amaningi ngobuntu kanye nendlela engavamile. Into ebaluleke kakhulu ukukwazi ukuthola lokho okufanelana nakho.
Akuwona wonke umuntu olungele ukuba ngumnikazi, esebenzise imali enkulu, futhi ngakho-ke akusiwo wonke umuntu okwazi ukuqonda yonke inhlobiso yemidwebo yangempela. Kumele kukhunjulwe ukuthi eminyakeni edlule umhlobiso wakho wokuvuna ukhula ngentengo, futhi izintelezi ezivela kuso zikhula kuphela.
Umhlobiso ungamangaza izakhamuzi zendlu yakhe, okwenze kube ngaphezu kwezinto ezingaphakathi. Kodwa kuphela uma udala ukwakheka kwezinto eziningana ezingavamile.
Indlela yokuhlukanisa ubucwebe bevintage kusuka ekuhloleni okuvamile?
Umhlobiso kufanele udalwe okungenani eminyakeni engaphezu kwengu-20 eyedlule, okungukuthi, iminyaka yobudala yilona umgomo oyinhloko. Ochwepheshe bangempela emhlabeni wezemfashini baqinisekisa ukuthi yilokho okwakusungulwa ngaphambi kweminyaka yama-1960 kuthiwe ukuvuna, hhayi ngaphambili.
Isitayela somhlobiso kufanele sibonise i-epoch ekhonktshi ne-swatmins kanye nokungafani.
Indlela yokukhetha isikhwama esifanele: imithetho eyisisekelo yokukhetha isikhwama esiphelele
I-TOP-3 yezingubo ezinhle kakhulu-2017 ngo-Mashi 8
Indlela yokwakha ubuhlobo bomndeni
Yeka ukuthi ungaphutha kanjani lapho ukhetha i-shampoo
Isaladi ne-brynza rye imvuthu utamatisi kanye ne-ba
Amafutha omRoma okwenyuka kwebele
Iyini i-herpes nokuthi ibonakala kanjani, incazelo